Ntc र Ncell मा फोन नलाग्दा तपाईँले सुन्ने आवाज कसकाे हो, चिन्नुहोस् ? (भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/Ntc र Ncell मा फोन नलाग्दा तपाईँले सुन्ने आवाज कसकाे हो, चिन्नुहोस् ? (भिडियो)
Ntc र Ncell मा फोन नलाग्दा तपाईँले सुन्ने आवाज कसकाे हो, चिन्नुहोस् ? (भिडियो)
काठमाडौँ बिबिसी । तपाईँले फोनमा सुनिरहने आवाज कसको हो ? फोन व्यस्त हुँदा, अरू कुनै कारणले सम्पर्क हुन नसक्दा वा अन्य जानकारी अथवा सेवा लिन खोज्दा फोनमा महिलाको स्वर बजेको त तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ। उनीहरूले दिने रेकर्ड गरिएका सन्देश सुनेर केही प्रयोगकर्ताहरू झर्को पनि मान्छन्। तर केहीलाई भने ती महिला को हुन् भनेर जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन्छ। “तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ। केही समयपछि पुन: डायल गर्नुहोला। नेपाल टेलिकममा सुनिने यो स्वर अनुपमा कर्माचार्यको हो।
“तपाईँ हामीले फोन गर्दा टेलिकममा सुनिरहेको स्वर दिने कलाकारहरूमध्ये दुईजना भूमिका र सुबानीसँग सृजना श्रेष्ठले कुराकानी गरेर तयार पारेको यो भिडियो हेर्नुहोस्।
तपाईँले फोनमा सुनिरहने आवाज कसको हो
फोन व्यस्त हुँदा, अरू कुनै कारणले सम्पर्क हुन नसक्दा वा अन्य जानकारी अथवा सेवा लिन खोज्दा फोनमा महिलाको स्वर बजेको त तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ। कसको होला ती स्वरहरू?
Gepostet von BBC News नेपाली am Samstag, 4. Mai 2019